MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများအား
ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ပြုရန် နိုင်ငံတကာဥပဒေရှုဒေါင့်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟူသော စကားလုံးအား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောဆိုနေ ကြ သော်လည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအရ တည်ဆောက်ထားသောလွှတ်တော်နှင့် အစိုးရတို့ သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ နိုင်ငံ တကာ လူ့ အခွင့် အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် ဥပဒေများအခြေခံ နှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြည်တွင်း ဥပဒေ များအား မည်သို့ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုသင့်သည်ဟူသည့်အပေါ်တွင်လည်း ကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြု ထားသော နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများအား ပြည်တွင်း၌ လက်တွေ့ မည်သို့ကျင့်သုံးသင့်သည် ဟူသည့်အပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ယနေ့ အချိန်အထိ စိုးစဉ်းမျှအလေးထား ဖေါ်ဆောင်ခြင်း မရှိ သေးချေ။ ယင်းသို့ ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အမည်ခံမျှသာ ရှိနေပါမည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံတခုဖြစ်သည်။ သို့ ဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂပဋိဥာဉ် စာတမ်းအပိုဒ် ၂၅ အရ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား လက်ခံ အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။  ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ လုံခြုံရေး ကောင်စီသည် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ အမြောက်အများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူ များအနေဖြင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေအခြေခံများအားလေးစားရန် ထပ်ခါတလဲလဲ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု ဥပဒေရှုဒေါင့်မှနေ၍ ပြင်းထန်သော ချိုးဖေါက်မှုကြီးများအဖြစ် လုံခြုံရေး ကောင်စီက ရှုံ့ ချသော အကြောင်းရပ် များတွင် တိုင်းရင်းသားများကိုမျိုးဖြုတ်ခြင်း၊ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီး များအား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း တို့ လည်းပါဝင် သည်။ ယင်းတို့ အားကုစားနိုင်ရန် ၂၀၀၀ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် နေ့ တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီက ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၃၂၅ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပါရှိသည်။
“ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး၊ ပဋိပက္ခများမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရေးတို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးမြင့်စေရန် လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းမှု နှင့် လုံခြုံမှုတိုးမြင့်ရေးနှင့် ထိမ်းသိမ်းရေး တို့ အတွက် ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှတွင် ၄င်းတို့ တန်းတူညီမျှ ပြည့်ပြည့်၀၀ ပါဝင်ပတ်သက် ခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကိုလည်းကောင်း အလေးပေးလျှက် ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေး၊ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး နှင့် ပဋိပက္ခများမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို ထပ်မံ အတည်ပြုသည်။”
၃။ သို့ ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့် မှ စ၍ အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အဆက်မပြတ်ကျင်းပလျှက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ခံစားခဲ့ရသည့် တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးများ နှင့် ယင်းတို့ ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပါဝင် ပတ်သက်မှုကို ယခု အချိန်အထိ ဥပက္ခာ ပြုထားခံရဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် အညီ နိုင်ငံ၏ တာဝန်ရှိမှုကို ချိုးဖေါက် နေခြင်းဖြစ်သည်။
၄။ အရေးပေါ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများတွင် အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအား ကာကွယ်စောင့် ရှောက် ရန် ကုလသမဂ္ဂကြေငြာစာတမ်း အား စံအဖြစ်လက်ခံအသိအမှတ်ပြုကာ၊ မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြု ထားသော ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် အား လိုက်နာဖေါ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို အခြေခံ၍ လက်နက်က်ိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း ကလေးများအနေဖြင့် ကလေး အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်အရ အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားခံစားခွင့်၊ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ မွေးပြီး ပြီးခြင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ပိုင်ခွင့်၊ မိဘများနှင့် အတူနေထိုင်ခွင့်၊ စိတ်ပိုင်း နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဘက်မှုမှ အကာ အကွယ် ရယူခွင့်၊ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကျမ္မာရေး စောင့်ရှောက်ခံပိုင်ခွင့်၊ ထိုက်သင့်သည့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းခံစား ပိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်၊ (တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များတွင်) ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများ ကျင့်သုံးခွင့်၊ အစရှိသည့်အခွင့် အရေးများ ဆုံးရှုံးလျှက်ရှိသည်။
၅။ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးခံစားခဲ့ရသည့် တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးများနှင့် ယင်းတို့ ကို ကိုယ်စား ပြုသည့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် တနည်းနည်းနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့် ရှိမှ သာ မိခင်ဖြစ် သော အမျိုးသမီး များအတွက်သာမက ၄င်းတို့ ၏ သားသမီးများဖြစ်သော ကလေးများ၏ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှု များကို ပါ ဖေါ်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ဆုံးရှုံးမှုများအား မည်သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် နောင်မဆုံးရှုံးအောင် မည်သို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်ကြောင်း ၄င်းတို့ ၏ အကြံပြုချက်များကို ရယူကာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်များတွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြ ချုပ်ဆိုသင့်သည်။
ဥပဒေ အထောက်အကူပြုကွန်ရက် နေ့ စွဲ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်
အသေးစိပ်သိလိုလျှင် ဆက်သွယ်ရန်။ ဦးအောင်ထူး (ရှေ့နေ) တယ်လီဖုံး (၄၆) (၀) ၇၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅
 The UN Charter Article (25): “he Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”
 Eva La Haye, “War Crimes in Internal Armed Conflicts” Cambridge University Press, 2008, P. 63.
 Security Council Resolution 1325 was passed unanimously on 31 October 2000. Resolution (S/RES/1325) is the first resolution ever passed by the Security Council that specifically addresses the impact of war on women, and women's contributions to conflict resolution and sustainable peace.
 “Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision- making with regard to conflict prevention and resolution,”
 Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, Proclaimed by General Assembly resolution 3318 (XXIX) of 14 December 1974.
 UN Convention on the Rights of the Child Article (3)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (6)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (7)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (9)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (19)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (24)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (27)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (28)
 UN Convention on the Rights of the Child Article (30)
at 1/29/2014 01:08:00 PM